Aubameyang oo faahfaahin ka bixiyay wararka sheegayay in Barcelona ay xiiseyneysay saxiixiisa, muxuuse ka yiri kulanka caawa ee Liverpool?? – Gool FM
Dajiye September 28, 2020
(Barcelona) 28 Sebt 2020. Kabtanka kooxda Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa sheegay inuu helay dalab rasmi ah si uu ugu biiro Barcelona xagaagan, marka lagu daro dhowr koox oo kale oo reer Yurub ah, laakiin wuxuu doorbiday inuu sii joogo kooxda reer London.
Aubameyang ayaa saxiixay todobaadyo ka hor, dukumiintiyada lagu cusbooneysiinayo qandaraaska uu kula joogo Arsenal ilaa xagaaga 2023, iyadoo mushaharkiisa toddobaadlaha ah laga dhigay 250 kun oo pounds.
Shabakada “ESPN” ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Kabtanka kooxda Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang, waxaana uu yiri:
“Waxaan helay dalabyo badan, gaar ahaan kooxda Barcelona, waxay doonayeen inay ila saxeexdaan, laakiin muhiimadeyda waxay ahayd inaan sii joogo Arsenal”.
“Waan diiday inaan u wareego koox kale, sababtoo ah Mikel Arteta oo igu qanciyay inaan sii joogo, gaar ahaan madaama falsafadiisa ciyaarta ay la jaan qaadayaan qaabkeyga”.
“Sidoo kale jaceylka ay ii qabaan taageerayaasha ayaa igu riixay inaan cusboonaysiiyo qandaraaska”.
Aubameyang ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Barcelona si uu u bedelo Luis Suarez, oo warbixino dhowr ah lagu xaqiijiyay in Barca ay dooneyso inay fasaxdo xagaagan, taasoo dhab ahaantii dhacday maalmo ka hor.
Intaas kaddib Aubameyang ayaa sheegay in kooxdiisa Arsenal ay ka guuleysan karto Liverpool kulanka caawa ee horyaalka Premier League, wuxuuna yiri:
“Wax weyn ayey noqon laheyd inaan la tartamo Liverpool, waxaan diyaar u nahay inaan galno dagaalkan, waxaan aadi doono kulankan cabsi la’aan, waxaan dooneynaa inaan dhibaateyno iyaga”.
Kooxda Manchester United oo doonaysa inay N'Golo Kante keento garoonka Old Trafford